१२ वर्षीय छोरा बचाउन आमाले मागिन सबैसामु गुहार …(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – Satya Samachar
Home/ स्वास्थ्य/जीबन शैली/१२ वर्षीय छोरा बचाउन आमाले मागिन सबैसामु गुहार …(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
१२ वर्षीय छोरा बचाउन आमाले मागिन सबैसामु गुहार …(पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
जाजरकोट : बारेकोट गाउँपालिका–९ काप्तीकी तारा विक छोराको उपचार गराउने रकम नपाउँदा समस्यामा परेकी छिन्। उनले १२ वर्षीय छोरा वीरेन्द्र विकको उपचारका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन नसक्दा सबैसामु गुहार मागेकी छन्।
केही महिनादेखि बिरामी भएका वीरेन्द्रको फोक्सोमा पानी जमेको र रगतमा कीटाणु भेटिएको चिकित्सकले बताएका छन्। वीरेन्द्रको उपचार चौरजहारीमा गर्न नसकिने र उपचारका लागि नेपालगन्ज या काठमाडौं लैजान डेढ लाखसम्म खर्च लाग्ने चिकित्सकको भनाइ छ। गरिबीका कारण छोराको उपचारका लागि उनले सबैसँग सहयोगको याचना गरेकी छन् ।
ताराका पति दीपक नेपाली अर्की श्रीमती लिएर भागेपछि उनलाई छोराको उपचारमा समस्या परेको हो। बिरामीसहित चार छोराको लालनपालनको जिम्मा पनि उनकै काँधमा छ।पतिले छाडेदेखि मजदुरी गरेर दिदीको झुपडीमा शरण लिई बसेको उनले बताइन् ।
त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कक्षा ६ मा अध्ययनरत वीरेन्द्र फोक्सोको समस्याका कारण हिँडडुल पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बिरामीकै कारण उनी लामो समयदेखि विद्यालय जान सकेका छैनन् ।
राम्रा मानिसले किन दुःख पाउँछन् ? यस्ता छन् विवेकान्दका ७ रोचक जवाफ
कम समयमै बढी मदिरा सेवन गर्ने पूर्ण स्वस्थ व्यक्तिसमेत हृदयाघातको जोखिममा
नेपाली लाई क्यान्सर लाग्नुको मुख्य कारण र बच्ने उपाए….
नथुपार्नुस् वीर्य, थुपर्दा यस्ता समस्या आउछ्न…